Eva Foam Puzzle Mat Eva Foam nokupiringidza Floor Mats 9 Titles Exercise Mat, 12 "ne 12" - China Luoxi Plastic zvinogadzirwa fekitari
Eva Foam Puzzle Mat Eva Foam nokupiringidza Floor Mats ...
Wood Grain Floor Mat 3/8 padiki gobvu Foam Interlockin ...
Dambanemazwi Exercise Mat naEva Foam nokupiringidza usina kukonekita
nokupiringidza furo nepanhovo
MWANA KUCHENGETA Baby Large Play Mat
Kids Carpet Play bonde
2 mativi kushandiswa XPE zvinhu mwana kutamba bonde
Anti-kutedzemuka, ngura nemishonga, Waterproof, finyamo nemishonga, Kunogara
Eva furo bonde
Opp bhegi, atorwa
300000 Piece / Pieces pamwedzi
mafirimu wakaputirwa pamwe muwedzero kadhi, zvino rakachengetwa mukati atorwa
mukati memazuva 10-35 mushure mekugamuchira dhipoziti
Eva furo bonde:
2, Non-chepfu, yakakwirira elasticity
3, wakanaka elasticity, akanga apfuura SGS uye ISO14001, uyewo kusangana Ul.
The Eva Mat Character:
1, Water nemishonga: rakavhara furo mamiriro, asiri absorbent, nyorova uchapupu, nemishonga zvakanaka mvura.
2, ngura nemishonga: Kudzivirira namakemikari ngura, semvura gungwa, mafuta, acid, alkali uye zvichingodaro.
3, Processability: asiri vadyi, zviri nyore kuti inopisa zvenzara, nokuveza, unhani uye kukodzera kunyatsotevera.
4, Shockproof: Chine kushinga zvakanaka, matunhu kusimba uye yakanaka buffer chaitika.
5, Heat Kuchengetedzwa: kuputira Good, chando uye vakaderera tembiricha nemishonga.
6, Environmental kudzivirirwa: No kunhuwa yaingowanikwa uye asiri kusvibiswa.
1. vatungamirire vakasununguka, formamide akasununguka, dzisiri chepfu, hapana murayiro, kwezvakatipoteredza naEva zvinhu
2. isapinda, Anti pitikoti
3. nyore kuchenesa, kuisa uye kufamba
Chitupa Chokuita SGS
1. Uri manufactory kana kutengesa kambani?
A: Tiri manufactory pamwe OEM / ODM basa.
2. Ndinogona kuwana mimwe mienzaniso pachena?
A: YES. FREE yokuenzanisira aripo, chete chokutakura zvinhu kubhadhara iri inobhadharwa mutengi.
3. Ndingava gadzirisa zvinhu angu?
A: Hongu, tinofara kugamuchira yenyu gadzirisa zvikumbiro, mavara, zvitarisiko, divi, zvakaoma, zviyo yokudhinda, 3D kuita, kugona uye mabasa; Zvichakadaro MOQ zvinofanira kufungwa.
4. Imhandoi muripo nzira kuti iwe upe?
5. Zvakadini imupota tsika muripo?
A: Tapota teererai: rokutengesa edu ndichaparidza tsika ukoshi sezvo vatengi zvinoda zvakanaka. Import mabasa, mitero uye mhosva haana kuiswawo pakati chinhu mutengo kana kutumirwa. kupomera Ndivo vatengi 'basa. Tapota bvunza wako nyika tsika yebazi kuziva chii izvi okuwedzera mari ichava asati kutenga. Kana nhumbi dzakanga shure kana vaparadzwe vasingakwanisi tsika-Clearance, ivo vakarondedzera mutengo kuchaita ngaitorwe vatengi.
6. Unhu kudzora here?
Tine nyanzvi QC chikwata, tichava kudzora zvinhu unhu munguva yose vakawanda kugadzirwa, uye tinogona kuita rokuongorora basa newe. Tichaedza nepatinogona napo kubatsira vatengi kana dambudziko kwakaitika.
7. Ko iwe kugadzira kwatiri?
Tine nyanzvi wakachenjera chikwata kubatsira mutengi redu kuita patani basa.
Previous: Eva furo vana chimeti
Next: Nokupiringidza Foam Mats gobvu Eva Exercise Flooring Soft & Non chepfu Kids Play Puzzle Vana & Baby Room
Dete Play Mat
Toy Play Mat
mwana zvinokambaira kutamba bonde
Eva Foam Anti-kutedzemuka Foam Puzzle Floor Play Mat K ...
Eva furo huni paburiro bonde
Kids dambanemazwi Alphabet, Numbers, 36 usina kukonekita uye Edg ...
Eva Kids Foam Play Alphabet ABC Plus Numbers Pu ...
Baby Foam Play Mat (36-Piece Set) 5 × 5 padiki ...